Ndi Paris echebe? | Otu Di na Nwunye
Ndi Paris echebe?
N'afọ ole na ole gara aga, Tracy dere ederede blog ahụmahụ anyị na Paris nke ahụ bụ, n'oge ahụ, zutere ọtụtụ nkwutọ. Eziokwu ahụ bụ na anyị nwere obi abụọ ma ọ bụghị Paris bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụghị na nrọ ndị na-enweghị atụ na ọtụtụ ihe nkiri na-eme ka ọ bụrụ iwe na ọtụtụ ndị njem America tinyere ụfọdụ na Europe. N'enyeghị oke, obi abụọ na nchekwa nke Paris adịghị emekpa ọtụtụ ndị ahụ Ndị Paris - onye n'elere anya na akwukwo a bu ihe ngosi nke ihe obodo ahu di.
Ya mere, ugbu a n'etiti ụwa niile mara gilet yellow nke malitere na Paris ma ọ gbasara ebe nile na Europe, anyị na-ahụ n'ezie na ndị mmadụ na-ajụ anyị, "Nụrụnụ, amaara m na Paris abụghị ihe ọ na-adịbu, ma ọ ka bụ Paris, ọ bụ eziokwu? Paris ọ dị mma? M ga-aga ebe ahụ? "
Ajuju ma Paris enweghi ike ileta, ma o bughi ya, abughi ihe kwesiri idi.
Isiokwu a dị iche na nke mbụ n'ihi na anyị chọrọ ilekwasịkwu anya na azịza ebumnuche maka ajụjụ ahụ - ọ bụ Paris dị nchekwa? Ọ bụ ezie na mbụ bụ akụkọ banyere ahụmahụ anyị (yana ahụmahụ nke ọtụtụ ndị anyị maara), nke a bụ ihe ọzọ ị ga-eme iji zaa ma Paris ma nchekwa ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ dịghị.
Kedu is "Nchekwa"?
Ịkọwa ma ma ọ bụ na anyị agaghị ahụ Paris ebe dị nchebe ị ga-eleta bụ n'ezie ịza ajụjụ ọzọ. Ndi Paris, ma ọ bụ n'obodo ọ bụla maka nke ahụ, dị mma iji nwee nleta na-eleta ya?
Eziokwu bụ, ọtụtụ ndị na-eche banyere nchekwa dịka naanị ịza, "ọ bụrụ na m gaa ebe ahụ, m ga-alọghachi n'otu akụkụ n'enweghị ihe a na-apụnara n'ike?" Ọ bụrụ na ọ bụ ajụjụ ahụ ịchọrọ ịmara azịza ya, ọ ga-abụ na anyị abụọ agwa gị na, ee, ị ga eleghị anya gaa na Paris wee laghachi na ihe onwunwe gị ma dị ndụ.
Rịba okwu ahụ eleghị anya.
Eziokwu bụ, ma enwere m obi ụtọ na Paris nwere ike ịdị ize ndụ karịa Middle East, ọ bụghị obodo na anyị, ma ọ bụ ọtụtụ ndị anyị maara, nwere obi ụtọ na ya. N'ezie, ọtụtụ mmadụ karịa mmadụ iri na abụọ anyị mara na enwewo otu n'ime ihe ndị a:
Ịzụta ihe nke aka ma ọ bụ ihe onwunwe (ma ọ bụ mgbalị nke izu ohi)
Nsogbu anụ ahụ
Mmetụta nke ịtu egwu
Mmetụta nke iwe
Eziokwu ka a gwara anyị, anyị nwere ise ise n'ime awa asatọ n'ime obodo. Ọbụna n'oge na-adịbeghị anya laghachiri na Paris na November, na-enwe olileanya ịhụ ihe na-enye anyị mmetụta na anyị nwere ike ihie ụzọ n'oge gara aga, mana kama emere ka ekwenye na nkwenkwe anyị na Paris abụghị n'ezie ala ebe anyị ga-eleta.
Ugbu a, ebe a bụ ebe ndị ọgba ọsọ malitere - ọtụtụ ndị ga - asị na ị nwere ezigbo oge na Paris, ị ga - etinye oge gị n'obere ebe, ebe ndị ahụ na - aga ebe nkiri, mana nke a bụ 100% nke ihe ị chọrọ mgbe Ị na-aga obodo nke ị ga-ahụ?
Anyị ekwesịghị izere Piazza Navona na Rom. Anyị ekwesịghịkwa izere Westminster na London ma ọ bụ Charles Bridge na Prague. Ya mere, gịnị mere ọtụtụ ndị ji enye ndụmọdụ ka ha zere ihe na Paris ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ iji hụ?
N'ihi na n'eziokwu, Paris na-eme ka ọ ghara ịdị njọ karịa obodo ndị ahụ. Ọrụ mmebi ahụ na-amalite na mpaghara ebe kachasị elu na njem nleta, mgbe ahụ gbasara dị ka mkpịsị aka na-agafe obodo. Ọ bụrụ nchekwa pụtara ugwo nkasi obi na egwu nke egwu mgbe ị na-eme njem, enwere ezigbo ohere ị gaghị eche na Paris.
Ọ bụrụ na ị jụọ ma ma ọ bụ Paris adịghị mma, gị, pụtara ịjụ gị ma ọ bụrụ na ị ga-aza ụda, nke ahụ bụ ajụjụ siri ike ịza, na otu kachasị mma na mpaghara ọnụ ọgụgụ karịa echiche.
Ikwu okwu n'isiokwu
Laurent Bourrelly si Ordino, Andorre [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], site na Wikimedia Commons
E nweela ọtụtụ ozi e dere banyere nchebe nchebe na Paris karịrị nnọọ afọ ole na ole gara aga, ma ọ bụ na ihe ndị mere na Bataclan. N'eziokwu, dịka ọtụtụ ndị si kwuo, Paris nọ na-aghọkarị obodo ndị kachasị ize ndụ na Europe ruo oge ụfọdụ.
Theodore Dalrymple dere na 2002 banyere nsogbu na-arịwanye elu nke ịda ogbenye nke Paris, mkpochapu nke ụlọ ọrụ etiti, na nsogbu na-arịwanye elu nke na-ehi ụra kemgbe ọtụtụ afọ na Paris. O dere banyere mpụ nke mpụ Paris, mgbe a na-ejigharị azụ-alleys, nke pụtara ugbu a n'ehihie. Akwụkwọ ndị dị na Europe dum, gụnyere UK, kwuru Paris a njem nleta "agaghị aga" ebe 2017.
Ala ndị ọzọ na-enye ma ọ bụ ndị na-ahụ maka nchebe njem ncheta na nyochaa ma dozie nchekwa dị ugbu a enwere mgbe nile na Paris edepụtara dị ka "obodo dị elu" nke nwere nsogbu - ọtụtụ ihe ga-eme na mmụba nke mpụ metụtara ndị omempụ n'obodo ahụ (nke na-anọchite anya ya 85% nke ọrụ metụtara òtù ndị ahụ dum mba). Ihe ka ọtụtụ n'ime nchegbu ahụ anaghị etinye aka na mpụ ime ihe ike (nke ọtụtụ ndị na-atụle na ọ bụ ihe ize ndụ dị ala), na ihe dị iche iche na nchịkọta dị iche iche - nke na-agbaso n'etiti ndị isi n'etiti ndị isi Europe.
N'ịghọta nke a, ọ dịkwa mma ịmara na ọtụtụ mpụ na Paris na-ezigaghị ọtụtụ ihe. Nke mbụ, afọ nke ọrụ mpụ bụ 13, ma e jiri ya tụnyere 6 na United States. Nke a bụ otu n'ime ihe mere ọtụtụ nchịkọta nhazi na pickpocketing na-arụ site na ụmụaka n'etiti afọ 8 na 12. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, a ga-ejidere ụmụaka ndị a ruo oge ụfọdụ, mana anaghị "akwụsị" site na njide, ewepụta ha ngwa ngwa (n'ime nkeji ma ọ bụ awa ole na ole) iji laghachi n'ọrụ ha.
A na-emekarị mpụ ime ihe ike n'ọtụtụ nganga na Paris. Anyị ga-enye ndụmọdụ ka ị zere (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee) Les Halles, Chatelet, Gare du Nord, Stalingrad na Jaures na abalị - ma kwupụta na ị na-ekpughe n'ebe ndị ahụ dị mkpa. Ndị a dị mma, akụkụ ndị na-amị mkpụrụ n'ime obodo, na ebe ime ihe ike dị ukwuu. A pụkwara ikwu otu ihe banyere ọtụtụ ebe dị na Northern Paris.
Ọ dịkwa oke mkpa, n'agbanyeghị ebe ị nọ na Paris, na-agbanyeghị profaịlụ ma zere ihe ọ bụla "na-apụ apụ". A ghaghị izere ihe ọ bụla metụtara okpukpe ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yana ụdị ọlaọcha ndị a na-ahụ anya.
Ebe nkiri njem nleta na Paris bụ ebe kachasị anya maka ịchọrọ ọnụ-njedebe, izu ohi, na ohi. Ọ dị njọ nke ukwuu na Ụlọ Eiffel, n'eziokwu, nke ahụ ndị ọrụ na ncheta a ma ama ejirila rụọ ọrụ na otutu oge n'ihi nchegbu banyere onodu ndi oru uzo di iche iche nke ime mpụ na ebe ahu. N'ihi ya, obodo ahụ emeela atụmatụ iji gbalịa inyere ndị njem nleta aka inwe nchekwube karị, dịka ịmekwu ihe ọzọ Ndị uweojii 5,000 n'okporo ámá nke Paris n'oge okpomọkụ gara aga iji gbasaa mgbasa nke mpụ megide ndị njem nleta.
Ọ bụ ihe dị mkpa maka obodo (na mba) nke yiri ka ndị njem na-ada ụra n'ụzọ dị njọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi iyi ọha egwu, nsogbu akụ na ụba, na ịrị elu ego. N'ezie, a na-eme atụmatụ na Paris na-ahụ n'ụzọ dị egwu 1.5 nde ole na ole ndị nlegharị anya kwa afọ, n'afọ ọ bụla kemgbe 2016 n'ihi ihe ndị a.
Otu esi echekwa na Paris
Otú ọ dị, ọ dị ma nọgide na-abụ, Otú ọ dị, ndị njem nleta na-abata na Paris kwa ụbọchị na-enwe ahụmahụ dị ukwuu - nke zuru ezu iji mee ka nkatọ ndị anyị mere n'oge gara aga metụrụ ụfọdụ nkwekọrịta siri ike. Ya mere, anyi nwere ike ikwu na e nwere Ee e ụgwọ mgbapụta na Paris? Ee e, anyị enweghị ike ikwu nke ahụ. Amaara m ndị hụrụ ya n'anya mgbe ha letara, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ndị ahụ gara leta ma ọ dịkarịa ala afọ asaa ma ọ bụ afọ asatọ gara aga. Maka anyị, anyị enweghị ọchịchọ ọ bụla ịla azụ n'oge a.
Ndị njem nleta na ndị njem na-achọsi ike site na okike, eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime unu ga-agụ nke a ga-eche, "eh, m ga-agbapụ ụlọ m. Achọrọ m ịhụ Louvre / Arc de Triomphe / Montmartre, wdg.... Anyị nụrụ na ọ dị ize ndụ tupu anyị agaa, wee gaa n'ụzọ ọ bụla. N'eziokwu, anyị ga-aga ọtụtụ ebe ndị ọzọ anyị nụrụ na ọ dị ize ndụ.
Ndị njem na-aga ebe ha chọrọ ịga, mgbe ụfọdụ, ọ gụnyere ebe ndị dị ize ndụ.
Ya mere, olee otu ị ga - esi nọrọ na Paris?
Maka ndi mbido, mee ihe niile i nwere ike ime iji pụọ n'ebe ndị anyị kwuru n'elu n'abalị. Enwere ihe dị mma nke nwere ike isi na ya pụta, ọ dịkwa ọtụtụ ihe ị ga-ahụ gburugburu ebe ndị mmadụ bi na ya ga-echebe gị.
Jidesie ebe ndi mmadu juru na ebe di nma n'abali. Nke a dịkwa mma, n'ihi na nke a na-agụnye ọtụtụ ebe ebe ịchọrọ ịchọrọ oge ọ bụla. Nke a bụ isi na-agụnye ịnọ na etiti obodo ahụ, ma ị kwesịrị n'ezie tụlee izere eriri elu nke Paris kpamkpam.
Ọ bụrụ na ị na-agagharị, emela ka onye njem nleta. Mee ihe amamihe dị iche iche iji nyere onwe gị aka, dị ka mkpuchi ọ bụla dị oke ọnụ dika igwefoto, smartphones, ma ọ bụ GoPros.
Nke a bụ otu ihe ị ghaghị ime na Paris: GỊ A Ego nwere!
Ya mere, gịnị bụ eriri ego? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ eriri dị mkpa nke na-achọ ịbanye n'okpuru uwe gị ma kechie ahụ gị. Ndị ohi enweghị ike ịhụ ya, ha dịkwa oke iji dozie ID gị, paspọtụ, ego, na ọnụ ụlọ ụlọ nkwari akụ - nke kwesịrị ịgụnye ihe niile ị nwere na gị.
Ihe anyị ji eme ihe bụ ihe siri ike, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịhụ n'okpuru uwe, ihe siri ike, na naanị ihe efu 15 bu on Amazon. Anyị ga-atụ aro na ọ bụghị nanị na-eme njem gaa Paris, ma na-ejegharị ebe ọ bụla!
Nke a bụ ihe ọzọ dị mfe iji nyere aka dobe gị - mee otu akwụkwọ paspọtụ gị ma hapụ ya na ụlọ nkwari akụ gị. Ọ bụrụ na ịmee ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-ejide eriri ego, ị ga-enwe otu akwụkwọ ozi paspọtụ gị n'ime ụlọ nke ga-eme ka ị nwee ike ịbanye n'ụgbọelu ma laghachi n'ụlọ.
Nke a bụ onye ọzọ buru ibu. Ekwula onye ọ bụla na - abịakwute gị, maka ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ha na-arịọ gị maka ntụziaka, ọ ga-abụ na ọ bụ ojoro na ụzọ ị ga-esi nweta obere akpa gị. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-arịọ gị ka ị bịanye aka n'akwụkwọ arịrịọ, maọbụ na ịkwụsị ịjụ ajụjụ ọ bụla, ọ bụ otu ihe ahụ. Enwere ebe ị ga-enwe mmetụta nke ọma na n'okporo ámá na-akwụsị ma jụọ ajụjụ onye ọbịbịa, ma ọ dị mwute na Paris abụghị otu n'ime ha.
N'ikpeazụ, na nke a bụ iji chebe atụmanya gị, ma atụla anya obodo dị ọcha. A ka nwere otutu ihe na-atọ ụtọ na Paris, ma ọ dịghị amasị ya na fim ahụ. Ọtụtụ n'okporo ámá dị unyi. Enwere nsogbu na-enweghị ebe obibi. Ọtụtụ ebe na-elekarị anya na-adịghị edozi, nke na-agbakwụnye n'echeghị eche eche. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ị ga-ahụ ihe dị ka nke a, ị ga-eme ka atụmanya gị dị ọkụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ihe ndị a ma jiri nlezianya na-eme njem, echeghị m na ị ga-enwe nsogbu zuru oke na-adị na Paris. Enwere ihe ole na ole dị ka ịmara ihe banyere ijide ụlọ ma na-ewere metro nke na-enweghị nkwupụta, ma n'ozuzu, mee ọtụtụ n'ime njem gị na-agagharị n'ehihie, na ịnọ na ebe mara mma na mpụ dị ala n'abalị. Ebe ahụ na- ụfọdụ.
Ebe a na-ekwu ihe a, onye maara ihe Paris ga - adị ka ọnwa isii? Ngosipụta ndị na-acha odo odo na-eme ka obodo ahụ ghara ileta, dịka ụfọdụ na-eche na ọ bụ ugbu a ka nke a na-aga n'ihu? Ikekwe. Ma, enwerekwa ohere na ụfọdụ ndị nwere ike ịmalite ya, ọhụụ zuru oke na Paris ga-eme ka ọ dị mma n'ihi ụbọchị ọ bụla ndị Parisị chọrọ ịchọtakwu onwe ha na ọtụtụ maka obodo ha.
Nke ahụ bụ olileanya anyị. Anyị ga-enwe mmasị ịga Paris na-enweghị isi maka nrọ nile nke onye ọ bụla, ma nwee olileanya na otu ụbọchị nke ahụ bụ eziokwu, ma ugbu a, e nwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ (ọbụlagodi na France) nke nwere ike ịmasị ya.
Ya mere, ọ bụ Paris dị nchekwa? Anyị echeghị otú ahụ, ma ị nwere ike ikweta ma ọ bụrụ na i jiri nlezianya mee njem na njem smartly. N'ikpeazụ, ọ bụ maka gị ịhọrọ!
NKWUKWU NDỊ ỌZỌ KWURU IHE PARIS
Map Paris - Mee atụmatụ njem gị na Paris na map a
RentalCars.com - Nnukwu saịtị maka iji ọnụ ahịa ala ụgbọ ala atụnyere
Skyscanner.net - Ebe kachasị mma anyị ga-ede akwụkwọ ụgbọelu
Expedia.com - Akwukwo nke ulo na ulo oru na Paris.
Akwụkwọ ntụziaka a tụrụ aro: Lonely Planet Paris
Akwụkwọ na-atụ aro: Achịcha Achịcha: Ezigbo Nweghachi - Ernest Hemingway
Category: Europe, France, Nhazi njem Tags: Obodo Békè, France, Paris, nchekwa
← Ọrụ Ndị Rom na Miami maka Di na Nwunye
Nri ngwa ngwa Boeuf Bourguinon →